Doodda qaddarka: laba aan isqaban! – Kaasho Maanka
Doodda qadarku waa arrin aad iyo aad u culus. Waa falsafad adag iyo dood xoogan. Qadarku waa mid isfahanwaa iyo kala dheeraansho ka dhex abuuray; faylasuufyada iyo wadaadada diimaha idilkood. Waa mid ay laba xagal oo kala fog kala taagan yihiin dadka aaminsan iyo ku diidani. Waa laba koox oo mid waa kuwa diidane, ay yihiin dad bilaa diimo ah, halka kuwa kale ay yihiin dad diin rumaysan, ta ay doontaba ha ahaatee.
Qadarku qolo ayuu wuxuu uyahay dhufays ay Alle ku difaacaan, una sawiraan inuu yahay maamulaha kownka iyo wixii ku jiraba, halka kuwa kalena u tahay marin ay usoo dhex qaadaan inay waxba-yahey ka dhigaan eebbe oo calalada inta uga siibaan bannaanka ku tuuraan! Waa laba kala war la’ runtii. Isuma dhawa ismana ogola!
Haddaan warka balaariyo waxaa weeye in qolo aaminsan tahay in wax walba oo dhacay, dhacaya, dhici doona, ciddii doonta iyo meeshii la doonaba haka dhacaane; la qaddarey oo horey loo qorsheeyay, Allena uu yahay midka ay wax walba jidwalkiisa ay ku socdaan. Wax walba inta uusan aduunka samayn ayuu meel dhigtay ayay ku garnaqsanayaan. Lowxul maxfuut ayay ku doodaan Muslinku inuu yahay jadwalka alle!
Shay walba wuxuu leeyahay wax ku lamman ama lid ku ah oo kasoo horjeeda. Haddii ay saas tahay dooddaas waxaa jirta mid lidkeeda ah oo dab iyo baasiin ay isku yihiin. Waa akhyaar ay ucuntami weyday in aduunkuba yahay filin horey loo jilay se, innaga uun nagu cusub oo moodayna inuu hadda billow yahay. Waxay qabaan in wax walba oo dhacay, dhici doona ama horey udhacay ay jirto sabab keentay saamaytaas (cause and effect law). Haddii sababtu isbedeshana ay natiijadu isbedelayso. Sidaas daraadeed qof walba waa xor masuul ka ah wuxuu samaynayo.
Haddii la dhaho qaddar wax la yiraahdaayi ma jiraan, waxaa ka dhalanaysa in Ebbe uu yahay magac uyaal (nominal) aan haba yaraatee wax awood ah lahayn. Eebbe bilaa qorshe ah. Eebbe aan wax fikrad ah ka haysan waxa koonka ka dhacaya ee nooluhu samaynayaan. Eebbe aan ogayn waxa dhici doono oo jaahil ka ah. Eebbe aan awoodin inuu haba yaraatee samayn karo ka hortag. Qaddarkuna wuxuu hooyo u yahay sifaad badan oo Eebbe leeyahay oo haddii asagu meesha kabaxo ayaguna aan ka harayn. Waxaana ku sidkan sida; qaadir, caliim, xakiim iyo IWM.
Haddiise la dhaho waar qaddarku waa jiraa oo wax walba waa la qaddarey, waxaa muhiim iyo lagama maarmaan noqonaysa in dhowr weydiimood warcelin ku filan loo helo. Waana meesha xalku ku jiro saan isleeyahay.
Haddii Alle wax walba horey u qaddarey, sidee u dhici kartaa in qofku xor u ahaado waxa uu samaynayo? Tusaale; waxaa la yiri qofku inuu janno galo ama naar ku arooro, waxaa la qorey markuu caloosha ku jiray. Markaa hadiiba wixii laguu qorey sina aadan ku dhaafeyn, wax walba oo aad samaysid, sidee masuul uga noqon karaa ficiladayda illeen jid la ii jeexay unbaan maraye? Mase suurtagal baa inaan qadarka khilaafo oo dookhayga ka ciyaaro?
Si kale aan u dhigo oo tusaale aan diimaysnayn ku siiyo. Hadda adiga akhristaha ahi, haddii aan qaddarka u raacno, malihid wax doorasho ah ama xorriyada aad ku akhrinaysid qoraalkaan. Waayo horey ayaa loo qadderey oo wax walba oo aad ku dhaqaaqaysid waa lasii qorsheeyay. Aan kuu sii bulaaliyo e, haddii aad daalacashada qoraalka joojisid waa qaddar! Hadii aad istaagto waa qaddar. Ku dar oo hadii aad qososhid waa isla halkii uun oo Alle ayaa qorsheeyay dhoolacadayntaada!
Marba haddii wax walba la qoray oo qoraal ku socdaan, ma jirto wax masuul aan ka nahay haba yaraatee. Ma jirto wax xorriyad ah oo aan innagu leenahay. Haa waxaynu nahay sida robot oo kale. Kaliya waxaan ku dhaqaaqaynaa wixii nalagu hago uun. Hagaha remote-ka haya unbaa masuul ah, xorna u ah waxa uu samaynayo inaguna malihin wax awood ah oo aan ku khilaafo karno. Shay ayaynu nahay.
Hadiise la yiraahdo wax la qadderey ma jiraane, waxaa jirta sabab iyo saamayn. Waxaa dhab noqonaysa in aynu nahay noole waxa uu samaynayo masuul ka ah. Xor u ah waxa uu qabanayo. Sidaas oo kalena taaganta wax laga bedeli karo. Timaadana la sii qorsheyn karo. Dadkuna iyagu yeelanayaan sifaadka; qaadir, calliim iyo xakiim.
Falsafadaha maxeey u burburiyaan diimaha? waxaan layaabey sheekh ka digaaya in la barto falsafad asigoo ku doodaya ‘Wey ku gaaleyneysaa’
Maxamed, Joosif Istaalin iyo Ilaahay
Qaybta: Nabi Maxamed, Xulka
axamed (571-632) oo aan u baahnayn qeexitaan waxa uu deegaan ahaan ka soo jeedaa magaalada Makka ee dhacda galbeedka boqortooyada maanta loo yaqaan Sucuudiga. Maxamed sida la soo wariyo waxa uu sheegtay in awood sare dooratay una xil saartay gaarsiinta dhambaal ay ugu talo gashay dadwaynaha adduunka ku dhaqan. Dadkii deegaankiisa oo fikraddan Nabinimada ama wakiil Ilaaheedku ayna ku cusbayn ayaa...
W/Q: Qoraa Dahsoon 4th September 2020